SADC Yotumira Vatungamiri kuMawirira Kuti VaMugabe Vabvisirwe Zvirango
SADC iri kutarisirwa mumazuva mashoma anotevera kutumira vatungamiri venyika dzemuAfrica vana kuAmerica nekusangano re European Union kuti vanokumbire kuti Zimbabwe ibvisirwe zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe naana sahwira vavo.
Zimbabwe iri kuda kuti izvi zviitwe nechimbichimbi, asi vatungamiri ava vanonzi vari kumboti vachiri vakabatikana nemabasa emunyika dzavo.
Vatungamiri ava vanosanganisira mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, mutungamiri weMozambique, VaArmando Guebuzza , mutungamiri weNamibia, VaHifikepunye Pohamba, uye sachigaro weAfrican Union, VaBingu Wa Mutharika.
Gurukota rezvemhando dzemoto, VaElton Mangoma, ndivo vanotungamira makurukota ehurumende ari muchikwata chiri kurwisa kuti zvirango zvibviswe. VaMangoma vanoti vari kutarisira kuti vatungamiri ava vaite izvi nechimbichimbi sezvo chiri chisungo cheSADC.
Zvichakadaro, sangano reEuropean Union rinoti richapa Zimbabwe mari inosvika 138 million euros kuti ibatsirikane. Sangano iri rinoti izvi zvinotevera kuvandudzwa kwezvinhu muhurumende yemubatanidzwa.
EU inoti ine imwe mari parutivi yekubatsira Zimbabwe inosvika 8 million euros yekubatsira munguva yesarudzo.
Asi yati ichaona kuti zvinhu zviri kufamba sei munyaya yekunyorwa kwebumbiro idzva . Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaCharles Mangongera, vanoti havaone zvekumboviga tsvimbo zvichibatsira Zimbabwe.